Ngwaọrụ Diamond, Ngwaọrụ Igwu PCD, PCD Ngwongwo Ngwucha - .wa
Gbado anya na Ọrụ Automobile
Jiangxi Earth Superhard Tools bụ a Chinese ọkachamara àgwà diamond ngwaọrụ manufactory mere anyị ngwaahịa na-ewu na nkume ụlọ ọrụ ruo ọtụtụ iri afọ. Ahịrị anyị gụnyere Diamond na PCD egweri / polishing ngwaọrụ, Diamond Saw Blades, Core Drill, Floor Grinders, Resin Pads na ihe niile a na-eji na polishing, elu prep ma hụ ọnwụ yana Stone ricgha ubi.
Hụ ihe ndị ọzọ
Single Ahịrị Cup egweri wheel JD1-1-5
Single Ahịrị Cup egweri wheel JD1-1-4
Single Ahịrị Cup egweri wheel JD1-1-3
Ugboro abụọ Ahịrị Cup egweri wheel JD1-1-2
Anyị na-enyekwa ndị ahịa anyị nnukwu uru, ma ọhụụ ma na-alaghachi. Enwere ike ịlele ihe ndị ọzọ maka ịghọ onye ahịa anyị na ịnweta ahụmịhe na-enweghị nsogbu.
Vehiclesgbọ ala agbadoro nke ụdị na nha dị iche iche
Onyinye ego iji kwụọ ụgwọ ya na ọtụtụ ngwaahịa
Abali 08, 2021
Mpekere ala na-ezo aka na-egweri ọgwụgwọ nke ihe / nkume / terrazzo / epoxy n'ala, nke na-eme ka terrazzo dị ọcha, elu elu, epoxy mortar layer na ochie epoxy n'ala, wdg Naanị ugbu a, m ji ụlọ ọrụ mmepụta ihe na-egweri akpụkpọ ụkwụ HTC Diamond maka Concrete na Terrazzo Ala maka nke mbụ ...
Site na nke ise nke ise rue nke abuo, anyi g’eme ememme opupu ihe ubi n’oge a. Ndo maka ihe ọ bụla na - emetụtaghị gị ma biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ m ma ọ bụrụ na ị nwere ọsọ ọsọ iji nweta azịza ...
2020 Spring Festival Ezigbo ahịa, Site na Feb 5th rue 20, anyị ga-eme ememme mmiri n'oge mmemme a. Ndo maka ihe ọbụla na - emetụtaghị gị ma biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ m ma ọ bụrụ na ị nwere mberede ị ga - enweta azịza. Achọrọ m iji ohere a chọọ gị na ...